Ogaden News Agency (ONA) – OOL – Banaabax balaadhan oo lagaga soo horjeedo waftigii Itobiyaanka ahaa oo ka dhacay Minneapolis.
OOL – Banaabax balaadhan oo lagaga soo horjeedo waftigii Itobiyaanka ahaa oo ka dhacay Minneapolis.
Shalay oy taariikhda ahayd 3da bishan Dec. ayaa boqolaal ka tirsan jaaliyadda Ogadenya ee dalka Mareykanka waxay ka hordhigeen banaabax si fiican loo soo abaabulay goob ay ku shirayeen wafti la sheegay in laga soo diray Adisababa uu hogaaminayay safiirka cadawga u fadhiya Washington. Shirkan ayaa dadka qurba joogta ah looga dhaadhiciyo inay maalgashi ku sameeyaan Itobiya, mana aha markii ugu horerysay ee dacaayad noocan oo kale ah ee maamulka Itobiya u soo diraan dibadaha.
Saacada ka hor inta aanu shirka bilaaban ayay jaaliyada Ogadenya oo ku guulaysatay inay helaan ogolaanshaha banaabaxa, inkastoo aad loo qariyay, ayaa waxay soo hordhoobteen goobta shirka. Daqiiqada ka dib ayaa waxaa u yimid banaabaxayaashii maareeyaya Hotelka Hayatt oo u sheegay inuusan Hotelka Hayatt taageersanayn xasuuqa lagu hayo shacabka Ogadenya sidaa darteedna uu diiday in shirkaa lagu qabto hoteelkooda iyagoo ka jawaabaya codsigii uga yimid jaaliyadda Ogadenya. Guushaa ay soo hooyeen jaaliyadda Ogadenya ayaa ahayd dharbaaxo xun oo ku dhacday gumaysiga ahayd. Isla mar ahaantaana aan wax u dhimi doonin xidhiidhka ka dhexeeya hoteelka Hayatt iyo jaaliyadda.
Ka dib, markuu diiday Hotel Hayatt shirka in lagu qabto, ayaa waxaa loo wareejiyay Renaissance Hotel. Banaanbaxayaashii oo wata codbaahiyayaal waaweyn ayaa goobtii tagay oo ku horqabtay dhigay banaabax balaadhan.
Wariyaha Ogaden Online oo goobtaa joogay ayaa sheegay inuu ku qiyaasay dadka shirka isugu yimid inay gaadhayeen ugu badnaan 25 qof oo uu ku jiray mid dabadhilif Somali ah oo ka yimidMinneapolis. Wuxuuna intaa raaciyay inay hayaan sawiro iyo filim ay la wadaagi doonaan akhristyayaasha.
Jawiga oo aad u qaboobaa ayay hadana dadkii isugu soo baxay goobta banaanbaxa waxay ku miijyeen siday uga xun yihiin dhibaatada lagu hayo dadkooda iyagoo sitay boodhadh lagu cambaareynayo xukuumadda Wayanaha oo sheegaya xasuuqa ay ka wado xukuumadda Meles Zinawi Ogadenya.
Warar iyo sawiro iyo filima dheeraad ah ayaan ka sugaynaa saacadaha soo socda wariyayaashii goobta joogay.